Ukuguqulwa kweNdiza yabagibeli be-Airbus ibe yiFreighters: Imodeli ye-Ascent Aviation Service
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Ukuguqulwa kweNdiza yabagibeli be-Airbus ibe yiFreighters: Imodeli ye-Ascent Aviation Service
Airlines • Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba!
AbakwaSine Draco Aviation Development Ltd. (“Sine Draco”) namuhla bamemezele ukuthi kungeniswe indiza engu-A321-200 endizeni i-Ascent Aviation Services eTucson, e-Arizona, ukuze iguqulwe isuke kumgibeli iye kumthwalo wezimpahla. Indiza izobizwa nge-A321-200 SDF ngemvume ye-FAA Supplemental Type Certificate elindelwe ku-3rd ikota 2022.
Umgibeli weSine Draco A321-200 SDF oya ekuguqulweni kwemikhumbi unikeza isisombululo sezomnotho esifanele sesizukulwane esilandelayo somgwaqo othwala imithwalo.
Inguquko ifaka ukufakwa kocango lwezimpahla olungamasentimitha angu-142 ububanzi ngamasentimitha angu-86-intshi, isitolo semithwalo esiyinhloko seClass E esinezikhundla eziyishumi nane zekhonteyina nohlelo lokuphatha imithwalo i-Ancra International. Izingxenye ezingaphansi zezimpahla zingabamba neziqukathi eziyishumi, kuthi i-A321 ibe uhlobo lokuqala lwendiza ekilasini elincanyana lokuthuthwa komzimba ngaleli khono."Ukungeniswa kohlobo lweSine Draco A321-200 SDF ukuze kuguqulwe kuyingqophamlando yohlelo lwethu," kusho Isikhulu Esiphezulu se-Sine Draco, u-Alex Deriugin. “Zonke izingxenye ezinkulu zisemkhankasweni nasezinhlelweni ezihleliwe, imidwebo yobunjiniyela kanye nemibhalo yezobuchwepheshe isesigabeni sokugcina sokuphothulwa, futhi izingxenye nezinsimbi kutheleka esikhungweni i-Ascent nsuku zonke. Ukungeniswa kwendiza okuyisibonelo kungumvuthwandaba wamaqembu eSine Draco Engineering, Operations and Supply Chain asebenza kanzima ngokubambisana nabalingani bethu bemboni. ”Abakwa-Ascent Aviation Services bazobe benza ukuguqulwa kwendiza ngokuqedela umsebenzi wokuthinta, ukuhlela ukuguqula kanye nezidingo zokuhlola. Isheke lesondlo elisindayo elilinganiselwe lisanda kuqedwa endizeni eyisibonelo futhi lizophothulwa ngesikhathi sokuguqulwa.
I-Ascent izophinde inikeze ukugcinwa nokusekelwa kolayini bezindiza ngesikhathi sohlelo lokuhlolwa komhlaba nolwezindiza ngemuva kokuguqulwa.
UDave Querio, uMongameli kanye noMphathi Omkhulu we-Ascent Aviation Services uthi, “ukungeniswa kohlobo lwendiza iSine Draco A321-200 SDF esigabeni sayo sokuguqulwa kukhombisa ngokusobala wonke umsebenzi onzima osetshenziswayo nsuku zonke ngabasebenza eSine Draco noKwenyuka. Ngihalalisela lonke iqembu le-Sine Draco ngokuhlangabezana nalengqophamlando. Sonke lapha e-Ascent sihloniphekile ngokuba yingxenye yempumelelo yakho futhi sijabule ukudlulela esigabeni esilandelayo sohlelo lokuguqulwa. ”